Cory Harbor - Kulliyadaha Hore ee Colorado
Cory Harbor waxay in ka badan toban sano oo khibrad ah u leedahay maamulka tacliinta sare. Wuxuu ka soo shaqeeyay jagooyin kala duwan oo hoggaamineed oo ka dhex jira hay'adaha tacliinta sare ee sare si ay si togan ugu saameeyaan khibradda ardayga. Laga soo bilaabo 2013-2016 Mudane Harbor wuxuu xubin muhiim ah ka ahaa barnaamijka diiwaangelinta dejinta tacliinta iyo horumarka ardayda ee Jaamacadda Northwest. Laga soo bilaabo 2017-2019 wuxuu mar kale ka caawiyay Jaamacadda Colorado Boulder inay gaarto rikoorro ku saabsan qalin-jabinta, sii-haynta ardayda, iyo hanashada tacliinta.
Intii uu ku gudajiray shaqadii Mr. Harbor ee tacliinta sare, wuxuu kasoo shaqeeyay xilal badan oo ay kamid yihiin, xirfadaha tacliinta iyo horumarinta xirfada, qorista ardayda, aqbalida, maaraynta kiisaska, fududeynta awoodaha, barnaamijka sanadka koowaad iyo horumarinta manhajka, qaabeynta barashada, fududeynta dejinta ardayda, jaamacad u hoggaansamida, iyo maareynta miisaaniyadda. Isku soo wada duuboo, shaqadiisu waxay ahayd mid arday ku saleysan, u janjeedha koritaan, iyo qiimeyn. Maaddaama uu yahay ardaygii hore ee kulleeyaha ahaa, Mr. Harbor wuxuu dhiirrigeliyaa falsafadda hoggaaminta tababarka maadaama uu rumeysan yahay in tababarka uu horseedo ka-qaybgal, waxqabad, iyo natiijooyin.
Isaga oo jiilkii kowaad ka qalin jabiyay kuliyad, Mr. Harbor waxa uu bartay oo ka shaqeeyay adkaysi iyo dadaal si uu u kasbado saddex shahaado oo uu ka qaatay Jaamacadda Missouri State University, halkaas oo uu ku qaatay BS, MS, iyo, ugu dambayn, MBA. Inta lagu jiro wakhtiga firaaqada, wuxuu ku raaxaystaa akhriska, barashada, tababarka waxqabadka ciyaaraha fudud, iyo, inta badan, wakhti la qaato xaaskiisa Nicole iyo saddexdooda carruur ah Luca, Liviana, iyo Luna.
CEC Castle Rock, Maamulka CECCR